Manchester United oo qatar ugu jirta inay heli weyso leylinta macallinkeeda cusub ciyaarta Arsenal – Gool FM
(Manchester) 30 Nof 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa walaac ka muujineysa in macallinkeeda cusub ee Ralph Rangnick uu leylin waayo kulanka weyn ee ay Arsenal la balansan tahay habeenka Khamiista kaasoo ka tirsan horyaalka Premier League.
63-sano jirkan ayaa shalay aqbalay shaqada macalinnimo ee uu sida ku meel gaarka ah u leylin doono Red Devils inta ka dhiman xilli ciyaareedkan kaddib uu si toos ah ugu biiri doono waaxda la talinta ee kooxda.
Hase ahaatee, wargeyska afka dheer ee Daily Mail ayaa sheegay inay Man United ka cabsi qabto inuu Rangnick maamuli waayo safka kooxda ciyaarta Arsenal sabab la xiriirta helitaanka Fiisaha, warqadaha ogolaanshaha inuu dalka Ingiriiska ka shaqeeyo iyo xeerarka Korona Fayras lagu xakameynayo kuwaasoo sababi kara in kulanka Gunners uu kooxda sii maamulo Michael Carrick.
Haddii hoggaamiyaha cusub ee Manchester United uu seego kulanka Arsenal, waxaa lagu rajo weyn yahay in dhammaan caqabadahaas la xalliyo kahor ciyaarta Crystal Palace ee toddobaadka dambe.
Juventus oo halis ugu jirta inay u laabato heerka labaad iyo in laga soo celiyo horyaalkeedii ugu dambeeyay xilli ay baaris xooggan ku socoto... (Muxuu yahay dambiga lagu heysto?)
Koox ka ciyaarta Premier League oo Barcelona kaga horreysa raacdada loogu jiro saxiixa Zakaria